अमेरिकी खाद्य | USAHello | USAHello
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका नयाँ छन् भने, तपाईंलाई अमेरिकी खाद्य सिक्न सक्नुहुन्छ. तपाईं शायद धेरै विकल्प छन् कि याद छ! आफ्नो बच्चाको स्कूलमा अमेरिकी खाद्य र खाद्य बारेमा पत्ता. आफ्नो घर देशबाट खाद्य पदार्थ गर्न अमेरिका परिचय कसरी सिक्न. खाना बारेमा सांस्कृतिक मतभेद सम्हाल्न तरिका हेर्न.
फोटो: iStock / monkeybusinessimages
अमेरिकी खाद्य गर्न समायोजन
तपाईं त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा खाद्य लागि हो कति विकल्प हेर्नको अचम्ममा हुन सक्छ. त्यहाँ प्याकेजहरू सबै प्रकारका खानेकुरा धेरै ब्रान्ड. तिनीहरूले सिजन छैनन् जब फल र तरकारी पनि किनेको गर्न सकिन्छ. तपाईं रेस्टुरेन्टमा विभिन्न संस्कृतिका देखि खाना सेवा याद हुनेछ. छिटो खाना संयुक्त राज्य अमेरिका मा लोकप्रिय छ. यसलाई चाँडै एक सस्तो खानाको प्राप्त गर्न सजिलो छ, र पनि आफ्नो कार बाहिर रही बिना नै किन्न.
अस्वस्थ अमेरिकी खाद्य
धेरै अमेरिकी खाद्य पदार्थ, विशेष गरी छिटो खाद्य पदार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका मा चीनी या परिरक्षकों समावेश (सामाग्री अन्तिम अब यसलाई बनाउन खाना राख्नु). धेरै फल र तरकारी कीटनाशक संग sprayed छन्, जो टाढा कीराहरू राख्न भनेर फारमहरु प्रयोग रसायन हो. आफ्नो शरीर यी खाद्य पदार्थ को प्रकार प्रयोग हुन सक्छ तपाईं सुरुमा बिरामी महसुस हुन सक्छ वा वजन बढाउनका सुरु गर्न सक्छन् त. unhealthful खाद्य पदार्थ खपत छ धेरै अमेरिकी लागि एक समस्या, जो वजन भएको र अनुभव स्वास्थ्य समस्याहरू प्राप्त. तपाईं नयाँ खाद्य पदार्थ प्रयास गर्न उत्साहित हुन सक्छ हुनत, तपाईं त बिस्तारै गर्न चयन हुन सक्छ, आफ्नो शरीर समायोजन गरौं गर्न.
तपाईं healthfully र cheaply खान खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं अक्सर रेस्टुरेन्ट मा खाने जोगिन चाहनुहुन्छ हुनेछ. रेस्टुरेन्ट मा सेवा खाना कम स्वस्थ हुन tends र धेरै क्यालोरी समावेश, जो एकाइहरु उपाय एक खाना धेरै ऊर्जा कसरी छ हो. आइसक्रिम, जस्तै, धेरै क्यालोरी छ. फल र तरकारी कम क्यालोरी छ.
आप्रवासी खाना को अमेरिकी दृष्टिकोण
केही अमेरिकी आफ्नो मूल देशमा तपाईं खाना खाने छैन खोजेको हुन सक्छ. ठूलो शहर मा, त्यहाँ धेरै जातीय रेस्टुरेन्ट र मान्छे त छन् छन् विदेशी खाद्य पदार्थ बढी अनुभव. सानो सहर मा, कम सांस्कृतिक विविधता संग, मान्छे छैन अनुभव हुन सक्छ.
नयाँ व्यञ्जन परिचय
सबैभन्दा अमेरिका खाना पकाउने नयाँ प्रकार प्रयास गर्न खुला छन् र नयाँ व्यञ्जन प्रयास गर्न उत्सुक हुनेछ. धेरै अमेरिकी "potlucks भाग,"जो सामाजिक जमघट हुन् सबैलाई जहाँ शेयर गर्न पकवान ल्याउँछ. Potlucks ठूलो जमघट वा आकस्मिक रात्रिभोज मा हुन. यो तपाईंको खाना अरूलाई परिचय राम्रो मौका हुन सक्छ, विद्यालय र सामाजिक परिस्थिति दुवै. तपाईं पनि खाने को लागि माथि मानिसहरूलाई निमन्त्रणा र आफ्नो संस्कृतिको व्यञ्जन सेवा गर्न सक्छन्. केही मानिसहरू नयाँ खाना प्रयास गर्न खुला हुन सक्छ, तथापि, र यो कि आदर गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
आफ्नो बच्चाको स्कूलमा भोजन
अमेरिकी विद्यालयमा विद्यार्थी जवान बालबालिकाको लागि केही preschools बाहेक नास्ता प्राप्त छैन. तिनीहरूले स्कूल जाने अघि बच्चाहरु खान, केही विद्यालयमा छोराछोरीलाई स्कूल क्याफेटेरिया मा एउटा सानो खाजा किन्न सक्नुहुन्छ हुनत.
खाजा र नास्ता
खाजा खाने समयमा, बच्चाहरु या त घर देखि आफ्नो खाना वा ल्याउन खानेकुरा किन्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो बच्चाहरु को लागि लंच पैकिंग छोराछोरीलाई स्वस्थ खाना छ कि निश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो, पछि धेरै विद्यालय अस्वस्थ खानेकुरा र चीनी सदृश पेय सेवा. संयुक्त राज्य अमेरिका मा बच्चाहरु पनि स्कूल "नाश्ता" ल्याउन. यी खाद्य को सानो मात्रा तिनीहरूले कक्षाहरू बीच बिश्रामको समयमा खान छन्. उदाहरण फल समावेश, पागल, granola बारहरू, वा पटाखे.
खाना लागत मद्दत
आफ्नो परिवार पैसा धेरै छ गर्दैन भने, कहिलेकाहीं स्कूल निःशुल्क प्रदान गर्नेछ (वा सस्ता) भोजन, सहित नास्ता, आफ्नो बच्चाको लागि. हरेक स्कूल फरक छ, तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ त यो तपाईंको बच्चाको शिक्षक कुरा वा स्कूल सचिव उत्तम छ.
त्यहाँ बच्चाहरु अपरिचित खाना खाने को लागि आफ्नो बच्चा को मजा बनाउन सक्छ कि एक संभावना छ. साना छोराछोरीलाई नयाँ कुरा को कहिलेकाहीं डराएका छन् र विचारमा अरूलाई teasing आफ्नो भावना सामना गर्ने सही तरिका हो. तपाईं यस बारे आफ्नो बच्चा कुरा गर्नुपर्छ, तिनीहरूले हैरानी छैन या त धेरै विरक्तलाग्दो यदि यो हुन्छ. आफ्नो बच्चा खाना बनाउनुभयो छ के व्याख्या चयन हुन सक्छ, केही जातीय व्यञ्जन संयुक्त राज्य अमेरिका मा खाएको ती समान सामाग्री समावेश. यदि बच्चाहरु रुचि छैन, आफ्नो बच्चा स्थिति टाढा हिंड्न चयन हुन सक्छ. तिनीहरूले साथीहरू एक फरक समूह चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
छोराछोरीलाई खाना आफ्नो बच्चाको विकल्प खिसी जारी यदि, तपाईं वा तपाईंको बच्चा अवस्था बारे शिक्षक कुरा गर्नुपर्छ. अर्को रणनीति खाना संस्कृतिको बारेमा एक शिक्षण मौका बन्न सक्छ जो एक गतिविधि आयोजना बारे शिक्षक कुरा गर्न हुनेछ. तपाईं वर्ग लागि खाना को एक ठूलो रकम बनाउन सक्छ, र यो छलफल र साझा हुनेछ
अमेरिकी खाद्य अस्वीकार गर्न विनम्र तरिका
तपाईं खानाको लागि कसैको घरमा निमन्त्रणा गरिन्छ र किनभने तपाईंको धर्म वा संस्कृति को एक निश्चित खाना खान सक्दैन भने, तपाईं आफ्नो पाहुना र पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री कि व्याख्या सहज महसुस गर्नुपर्छ. यो तपाईं घटना जाने अघि यो के गर्न उपयुक्त छ. सबैभन्दा अमेरिका अरूलाई आहार को धेरै आदर गर्छन् र तपाईं प्रश्न आफ्नो जीवन शैली बारेमा थप जान्न गर्न अनुरोध गर्न सक्छ. तपाईं पर्याप्त खाएको र के छ भने कुनै पनि थप खाना चाहँदैनन्, यो भन्न अभद्र छैन, "कुनै धन्यवाद, म पूर्ण छु,"होस्ट प्रस्ताव समेत यो धेरै पटक.
Taboo वा-को पाउन गाह्रो खाद्य पदार्थ
तपाईं आफ्नो घर देशमा खाने प्रयोग गरिन्छ केही खाद्य पदार्थ या त उपलब्ध छैन वा Taboo छन्. Taboo अनुपयुक्त वा संस्कृति भित्र निषेध हालतमा. मासु केही प्रकार, यस्तो घोडा मासु र जनावरहरूको केही अंगहरु रूपमा, बेचिएको वा खान्छन्. धेरै अमेरिकी लाग्छ बच्चा वा भ्रूण जनावर खाने गलत छ. कीराहरू पनि परम्परागत आहार को भाग छैनन्, तर तपाईं कहिले काँही केही जातीय बजार तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
अमेरिकामा, डेयरी उत्पादन pasteurized छन् (गरम) जीवाणुहरु मार्न, र ताजा दूध र चीज यो प्रक्रिया मार्फत जाने कि छैन बेच्न सक्छौं. केही फल, यस्तो mangosteen र askee रूपमा, तिनीहरूले असुरक्षित मानिन्छ किनभने संयुक्त राज्य अमेरिका मा बेचिएको छैन.
म कहाँ स्वस्थ खानेकुरा किन्न सक्नुहुन्छ?
कसरी दोकान अनलाइन
जंगली जनावरहरु, शिकार र माछा मार्ने
भद्र कसरी हुन र संयुक्त राज्य अमेरिका मा असल बेहोरा छ